चार सदाचारी, ति कर्मयोगी – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/चार सदाचारी, ति कर्मयोगी
एक अबोध बालक, जसले सायदै सोचेका थिए ‘मेरो आँखाको दृष्टि फर्कनेछ र यो जुनीमा सप्तरंगी संसार देख्न पाउनेछु ।’ जसै उनलाई यो अनपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन्छ उनले पहिलो पटक के देख्न चाहन्छ ?
त्यही देवतातुल्य डाक्टर, जसले उनलार्ई सोच्दा पनि नसोचेको खुसी फर्काइदिए ।आँखा खोल्दा उनले देख्छन्, एक बटुलो र निर्दोस अनुहार । खस्रो तर दिव्य आभाले फक्रिएको । अनायसै उनको हात त्यो अनुहार सुम्मसुम्याउन हतारिन्छ । तिनको टाउको, अनुहार, चस्मा अनि आँखा । सबै एक एक स्पर्श गरेपछि बालकको गदगद् हृदयले भन्दो हो, ‘तिमी पनि साधरण रहेछौं, म जस्तै । तर, कति असाधरण काम गरिरहेछौं ।’
महावीर पुन : अर्थात उर्जा
यही चिनारी बोकर आज महावीर पुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सारथी बनेको छन् । उनी त्यही रातदिन खटिन्छन् । बेलामौकामा रमाइलो गर्छन् । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई नयाँ खोज–अध्ययन र आविष्कारको थलो बनाउन मरिमेटेका छन् ।
गोविन्द केसी : अर्थात सत्यग्राही
सरकारी कोटामा छात्रवृत्ति पाएर चिकित्सक बनेका डा. केसीले २७ बर्ष शिक्षण अस्पतालमा काम गरे । तीन दशक बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिए ।
सन्दुक रुइत : अर्थात ज्योति